अधिवक्ता पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : प्रधानमन्त्री दाबेदारको आधार हेर्ने कहाँ हो, राष्ट्रपति कि संसदमा? « AayoMail
अधिवक्ता पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : प्रधानमन्त्री दाबेदारको आधार हेर्ने कहाँ हो, राष्ट्रपति कि संसदमा?
2021,25 June, 1:24 pm
काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई प्रश्न गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता पोखरेललाई उनले, ‘प्रधानमन्त्री दाबेदारको आधार हेर्ने कहाँ हो, राष्ट्रपति कि संसदमा?’ भन्दै प्रश्न गरे।
प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले म सँग विश्वास छैन म लिँदिन भन्ने ठाउँ संसद हो कि राष्ट्रपति कार्यालय? यो कुरा स्पष्ट पारिदिनुस्। अनि, प्रधानमन्त्रीका दाबेदारको आधार हेर्ने कहाँ हो, राष्ट्रपति कि संसदमा?’
जवाफमा पोखरेलले भने, ‘आधार १४९ हो, प्रष्ट छ। यसमा विश्वास नलागे राष्ट्रपतिले संसदमा पठाइदिनुपर्छ नी। को-को सांसद कता-कता भनेर त्यसरी आधार पुष्टि गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। म सक्दिनँ भनेर भनेको व्यक्तिले अध्यक्ष हुँ भनेर गरेको दाबीलाई देखाएर देउवाको दाबी रद्द गर्नु राष्ट्रपतिको ‘मालाफाइड’ हो।’
जसरी पनि मुलुकलाई चुनावमा लैजाने त्यो पनि आफ्नै नेतृत्वमा भन्ने ओलीको चाहनामा राष्ट्रपति सहयोगी भएको जस्तो देखियोको उनले तर्क गरे।